Home Wararka (Daawo) RW/KX oo sheegay in dowladda ay u baahan tahay wakhti kororsi.
(Daawo) RW/KX oo sheegay in dowladda ay u baahan tahay wakhti kororsi.
RW Ku xigeenka JFS Mahdi Maxamed Guuleed ayaa maanta ka dhawaajiyay hadal inta badan shacabka Soomaaliyeed ay shaki ka qabeen kaasoo ah in MW Farmaajo uu qorsheynayo in uu sameysto muddo kororsi maadaama uu wakhtigiisii uu ku dhameystay dagaal kala dhexeeya siyaasiyiinta ka aragtida duwan iyo dowlad goboleedyada.
RW Ku xigeenka aya sheegay in waqtiga ay haystaan aanu ku filneyn isla markaana loo baahan yahay in dowladda la siiyo wakhti ay ku horumariso haya’adaha dowliga ah isla makaana ay ku kobciso dhaqaalaha.
Dowladda Farmaajo aya waxa ay xilka la wareegtay bishii Febraayo 7 sanadkii 2017, taaso ilaa maanta aanan qaban wax la taaban karo, iyadoo amnigii uu hoos udhacay, dhaqaalihii uu hoos u dhacay, ganacsigii uu hoos u dhacay isla markaana daqligii dowladda ee canshuuraha uu hoos u dhacay maadaama lacagaha canshuuraha ay kala bar ganacsatada ka qaataan kooxda Shabaab.
Halka hoose ka daawo’